यस्तो उद्घोष गरे ईन्चार्जबाट हटेपछि भीम रावलले जन्मभूमिबाटै, केपी ओलीलाई धन्यवाद दिदैं यसो भनेपछि झनै बढ्यो सम्मान !
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटी संयोजक डा. भीमबहादुर रावलले पहिलोपटक ईन्चार्चबाट हटेपछि जन्मभूमिबाटै पार्टीलाई झन् बलियो बनाउने उद्घोष गरेका छन् । रावलले एमाले रक्षाका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटी संयोजक डा. भीमबहादुर रावलले पहिलोपटक ईन्चार्चबाट हटेपछि जन्मभूमिबाटै पार्टीलाई झन् बलियो बनाउने उद्घोष गरेका छन् । रावलले एमाले रक्षाका लागि आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
मंगलबार धनगढीस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै रावलले व्यक्तिभन्दा पार्टी महत्वपूर्ण भएको भन्दै एमालेलाई जीवन्त राख्न आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
तर, कसैले पाखा लगाउन खाजेको खण्डमा भने त्यसको परिणाम राम्रो नहुने उनको चेतावनी छ । ‘एमाले बचाउनका लागि म मात्र हैन सबै कार्यकर्ता त्याग गर्न तयार हुनुपर्दछ‘, रावलले भने, ‘तर त्यागलाई कमजोरी ठानियो भने त्यसको परिणाम अर्कै हुनेछ, त्यो ठूलो गल्ति हुनेछ ।’
उनले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई एकताको पक्षमा उभिनसमेत आग्रह गरे । यसअघिका तिक्तता बिर्सेर एमालेलाई बलियो बनाउनेतर्फ सबैले लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले ओलीले पार्टी फुट्ने बेला देखाएको लचकताले नै अहिले केही सानो समूह मात्रै चोइटिएर गएको टिप्पणी गरे । पार्टीलाई एक बनाउन अध्यक्ष ओलीले पनि नेताकार्यकर्ताको भावनामा ठेस पुर्याउन नहुने रावलको भनाई छ ।
उनले अवसरवादी नेता तथा कार्यकर्ता अवसरको खोजीमा अत्रतत्र गएको बताए। लामो समयसम्म एमालेमै बस्दा अवसर नपाएका नेता कार्यकर्ता एकताको पक्षमा रहँदा पटक–पटक जिम्मेवारी पाएका नेता प्रलोभलानमा परेको उनले बताए ।